Digue Andohatapenaka: torana ilay mpitarika sarety nofaohin’ny 4X4 | NewsMada
Digue Andohatapenaka: torana ilay mpitarika sarety nofaohin’ny 4X4
Mafy ny fifandonana! Nofaohin’ny fiara 4×4 iray ny sarety tarihin’olona nitondra biriky, teny amin’ny Digue Andohatapenaka, omaly antoandro. Simba mihitsy ny lohan’ny fiara tamin’izany. Nipitika ilay rangahy nitarika sarety, ary torana mihitsy. Tsy tafahetsika ihany ny fiara andanin’izany. Nisy taxi-be iray nibahana, izay saika niharan-doza ihany koa tamin’ity tranga ity. Nifamonjena ilay mpitarika sarety ary nalefa teny amin’ny hopitaly.
Araka ny fanazavan’ny olona nahita maso ity loza ity, vokatry ny fandehanana mafin’ity fiara 4×4 ity, nahatonga ny loza. Nisongona izy io, ary nisy taxi-be rahateo somary nijanona teo aloha. Ilay sarety nandeha tanaty arabe, izay efa akaiky “rond point”, ary izao voadoana izao.
Amin’ny ankapobeny, tsy fandeferana, nahatonga ny loza. Eo ihany koa ny tsy fahafehezan’ny mpitarika sarety ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Maro izy ireny mifamoivoy eto an-drenivohitra, indraindray mamoa-doza tahaka izao. Ankoatra ny loza ateraky ny fiara, anisan’ny tokony hanaja lalàna ihany koa ny sarety, ny posy, ny bisikileta. Ireo olona mampiasa azy ireny, tsy mahalala sy tsy manaja izany fa mandeha amin’ny nahim-pony fotsiny. Mitera-doza tahaka izao, anefa, ary mety amoizana aina.